चार कम्पनीको सेयर मूल्य नेप्सेमा समायोजन : कुनको कति ? | शुभयुग
चार कम्पनीको सेयर मूल्य नेप्सेमा समायोजन : कुनको कति ?
काठमाण्डौ – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा यो साता विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, ज्योति लाइफ र जानकी फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको हो ।
नेप्सेमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयरपछि प्रतिकित्ता ८ सय १९ रुपैयाँ २९ पैसा कायम हुनेगरि मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सेले बिहीबारको अन्तिम कारोबार मूल्य एक हजार एक सय ७ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले एलआईसी नेपालको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले आइतबारको कारोबार बन्द भएपछि कायम शेयर मूल्यको आधारमा सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । २० प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ९४३ रुपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ ।
ज्योति लाइफको १० प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छ । आइतबार कम्पनीको शेयर ७१५ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
जानकी फाइनान्सको पनि १५ प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात ५८८ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम भएको छ । फाइनान्सको अन्तिम शेयर कारोबार ६७७ रुपैयाँ १० पैसामा भएको थियो । त्यस अनुसार नेप्सेले शेयर मूल्य समायोजन गरेको हो ।